Maitiro Ekudzima yako iPhone Pasina A Simba Bhatani: Iyo Inokurumidza Kugadzirisa! - Iphone
yangu iphone skrini yakatonhora uye wont kudzima
wedzera purindaita ku iphone yangu
maitiro ekumisikidza wifi kufona pa iphone 6
sei wifi yangu isingashande pafoni yangu
haikwanise kubatanidza kune wifi ine password chaiyo
Iwe unoda kuvhara yako iPhone, asi bhatani remagetsi rakatyoka. Kunyangwe bhatani rako remagetsi risiri kushanda, Apple yakagadzira nzira dzekuti unyatso kudzima yako iPhone. Muchikamu chino, ndichakuratidza kudzima kwako iPhone pasina bhatani remagetsi !
Ini ndinodzima sei yangu iPhone Pasina Bhatani reMagetsi?
Pane nzira mbiri dzekudzima yako iPhone pasina bhatani remagetsi. Iwe unogona kuzviita muZvirongwa zveapp, kana nekushandisa rakapotsa bhatani reKubatsira. Ichi chinyorwa chinokufamba iwe nenzira mbiri idzi uchishandisa nhanho-nhanho-nongedzo!
Bvisa Pasi Yako iPhone Uchishandisa Iyo Zvirongwa App
Kana yako iPhone iri kuita iOS 11, unogona kudzima yako iPhone mune iyo Zvirongwa app. Enda ku Zvirongwa -> General uye peta nzira yese kusvika pasi pechiso. Wobva wadzvanya Vhara uye swipe iyo icon yemagetsi kubva kuruboshwe kurudyi.
Bvisa pasi Yako iPhone Uchishandisa AssistiveTouch
Iwe unogona zvakare kushandisa AssistiveTouch, iri bhatani bhatani re iPhone, kuvhara yako iPhone. Kana isati yatanga kumisikidzwa, isu tichafanirwa kuvhura AssistiveTouch. Enda ku Zvirongwa -> kuwanikwa -> Kubata -> AssistiveTouch uye batidza switch iri pamusoro pekona kurudyi kweAssiveiveTouch.
nei foni yangu ichiti chishongedzo hachitsigirwi pakchaja
Zvino iyo AssistiveTouch iripo, tinya bhatani iro raonekwa pane yako iPhone kuratidzwa. Wobva wadzvanya Mudziyo ndokudzvanya ndokubata Lock Screen . Shandura icon yemagetsi kubva kuruboshwe kuenda kurudyi mhiri slide kumagetsi kudzima kuvhara yako iPhone.
Ini ndinodzosera sei yangu iPhone Kudzoka On?
Iye zvino wadzima yako iPhone, iwe ungangodaro unonetseka kuti uchaidzosa sei isina kana rinoshanda simba bhatani. Usatombo kunetseka - iPhones dzakagadzirirwa kuti dzokere kumashure paunenge uchivaunganidzira kune sosi sosi.
Paunenge wagadzirira kudzosera yako iPhone kumashure, tora Mheni tambo uye plug iyo mukombuta yako kana madzirojaja. Nguva pfupi yapfuura, iyo Apple logo ichaonekwa pakati pechidzitiro uye yako iPhone ichadzokera kumashure.
Tora Bhatani Rako Remagetsi Kugadziridzwa
Kunze kwekunge iwe uchifara kushivirira AssistiveTouch zvachose, iwe ungangodaro unoda kuti yako iPhone bhatani remagetsi rigadziriswe. Seta musangano kuti igadziriswe pane yako Apple Store kana yako iPhone yakafukidzwa neAppleCare +.
Kana yako iPhone isina kuvharwa neAppleCare +, kana kana iwe uchida kuti yako iPhone igadziriswe nekukurumidza sezvinobvira, tinokurudzira Puls, in-demand yekugadzirisa kambani. Pulse inotumira nyanzvi yakasimbiswa yakananga kwauri, ungave uri kubasa, kumba, kana kuresitorendi yemuno. Kugadziriswa kwepuls kunouya newaranti yehupenyu uye dzimwe nguva inodhura kupfuura mutengo wawakatorwa paApple Store!
Hapana Bhatani reMagetsi, Hapana Dambudziko!
Makorokoto, wabudirira kuvhara iPhone yako! Ini ndinokurudzira kuti iwe ugovane izvi pasocial media kuti udzidzise mhuri yako uye shamwari kudzima kwavo iPhone pasina simba bhatani.